Unyana wam ubukele izikrini ezininzi, inokuchaphazela njani impilo yakhe yamehlo? | Oomama Namhlanje
Unyana wam ubukele izikrini ezininzi, inokuchaphazela njani impilo yakhe yamehlo?
UAlicia tomero | 28/05/2021 10:00 | Ukuhlaziywa ukuba 28/05/2021 10:02 | ekufundeni, Iingcebiso, Phuhliso, Intsapho, ZeMpilo
Kukho izikrini ezininzi ezinokufumaneka kubantwana bethu, ezivela kwiifowuni eziphathwayo, izikrini zekhompyuter, oomabonakude okanye iitafile. Zininzi iiyure ezinikezelweyo kwaye zibenza babe ngamabanjwa olu hlobo lobuchwephesha. Ukuba abazali abayilungisi, ngaphandle kokonakalisa ukukhula kwabo kwengqondo kunokubangela iingxaki kwimpilo yamehlo akho.
Indlela yethu yokuphila iguqukile kule minyaka idlulileyo kwaye ngokungathandabuzekiyo ngobhubhane, apho ukusetyenziswa kwetekhnoloji ebantwaneni kukhule nge-76% ngaphezulu, besebenzisa umyinge weeyure ezi-4 ngosuku. Njengabazali kufuneka siyiqonde into eyiyo yonke iingxaki ezinokubangela ezi ntlobo zezikrini ukuba ukusetyenziswa kwazo kugqithisile.
1 Izikrini zinokuyichaphazela njani impilo yamehlo?
2 Ezinye iingcebiso eziphambili
3 Iingcebiso ngokusetyenziswa ngokuchanekileyo kwezikrini
Izikrini zinokuyichaphazela njani impilo yamehlo?
Uninzi lwezixhobo lubandakanya Ukukhanya kwe-LED ebekwe kwiscreen esikhupha ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka. Ukuphuma kolu hlobo lokukhanya ngoyena nobangela womonakalo owenzayo emehlweni, kuba uvelisa amaza aphakamileyo kunye nemitha ivelisa utshintsho kwi-retina. I-macula yindawo ye-retina echaphazeleka kukuvezwa okungaphaya kolu hlobo lokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka. Iiseli eziyilungisayo ziyawohloka kwaye zibangele ukonakala kwenzeke.
Ukusetyenziswa gwenxa kwezikrini kwizixhobo ze-elektroniki nako kunako ukwandisa umngcipheko we-myopia emehlweni. Oku kungenxa yokuba umbono ugxile embindini kwaye uthanda umbono we-tubular, othi Ingabangela uxinzelelo kunye nokudinwa okubonakalayo. Ukuvezwa okukhulu kuphelisa ukuqhubela phambili kwemyopia.
Abantwana neentsana abakavelisi ngokupheleleyo amandla okubonwa, ke abakabi nakho ukwenza kakuhle kwaye bajolise ngokuchanekileyo kwizinto, okanye ukulawula imitha eblue-violet yokuqaqamba kwezikrini. Ivelisa njengomphumo ukudinwa okubonakalayo, iintloko, ukucaphuka namehlo omileyo.
Enye into yokuqaqambisa kukusetyenziswa kwezikrini ngaphambi kokuba ulale. Amehlo fumana ukukhanya okumhlophe kwizikrini kunye namanqanaba okukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka okwenza ukuba kungalunganga kwingqondo wabantwana bethu. Umzimba awuyivelisi i-hormone melatonin ukuba ilale ngokwendalo kwaye ngaphandle kokungavelisi ezinye iinkqubo zendalo ezinokukhokelela komnye umonakalo.
Ezinye iingcebiso eziphambili
Into yokuqala esinokuyenza thina bazali shumayela nebhungaUkuba abazali basebenzisa izikrini imini yonke, kusengqiqweni ukuba abantwana bafuna ukuba ngumzekelo. Abazali ngabokuqala uku ukunciphisa iiyure zakho kwaye wenze ishedyuli yokunciphisa ukubonakaliswa kwakho ukuba nje yeyokuzonwabisa hayi eyomsebenzi.
Itekhnoloji akufuneki isuswe ngokuqatha, ukusukela ukusetyenziswa kwayo ngokuphakathi kunye nokusetyenziswa kwayo ngokuchanekileyo kunokuba nakho ukukhula ubuchule bokwenza abantwana. Abazali banokuba nolawulo olungcono lokusetyenziswa kwayo ngokuzibandakanya kwaye baphande kunye nabo kwizicelo zemfundo okanye kwiiwebhusayithi zophuhliso lwazo.
Ukuba umntwana unakho itekhnoloji yeziyobisi o Ukuhambahamba Ingayingxaki esinokuthi siyisombulule ngokujonga izizathu ezitsha zokuzonwabisa okanye ezinye iindlela zokuzonwabisa zabantwana zokuzonwabisa. Unokufunda elinye lamanqaku ethu apho sinikezela khona imidlalo yangaphandle.
Iingcebiso ngokusetyenziswa ngokuchanekileyo kwezikrini
Kuya kufuneka ugcine umkhondo wexesha lokusetyenziswa kwayo ngokuchanekileyo. Kuyacetyiswa ukuba phumla amehlo akho okungenani imizuzwana engama-20 rhoqo kwimizuzu engama-20 yokusetyenziswa. Qiniseka ukuba izikrini zinokukhanya okuchanekileyo okulungelelanisiweyo nokungafaniyo. Kufuneka zikhuselwe kukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka, nokuba kungokunxiba iiglasi zokuzikhusela okanye kukususa ukukhanya kwesixhobo.
Ukuba umntwana uyathanda ukubukela umabonwakude mayibekwe zi-2 okanye i-3 yeemitha kude kwaye ukuba kunokwenzeka kwigumbi elinokukhanya hayi ebumnyameni. Nangona kunjalo, uviwo olubonakalayo kanye ngonyaka lelona chiza lilungileyo lokufumana kunye nokulungisa iziphumo ezinokubakho kwaye uzisombulule ngexesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Unonophelo » ZeMpilo » Unyana wam ubukele izikrini ezininzi, inokuchaphazela njani impilo yakhe yamehlo?
Yintoni isifo sikaTreacher Collins kwaye simchaphazela njani umntwana?